HPF usoro mmiri horizontal efere friza, China HPF usoro mmiri horizontal efere friza Ndị na-emepụta, ndị na-ebubata, Factory - Square Technology Group Co., Ltd.
Onye na-eme ihe nkiri YT-4
Ezubere ụdị a nke friza a na-ahụ maka ihe eji eme ihe maka mmiri. Enwere ike iji ụdịrịrị friza a mee ihe maka ịzigharị ngwaahịa dị iche iche na trays, pans na igbe, nke kwesịrị ekwesị maka nri azụ, obere anụ juru na nri ndị ọzọ na blọk.
● Enwere ike iji ya ma ọ bụ oke osimiri ma ọ bụ nke oke osimiri.
Igwe nju oyi nwere ike ịbụ Freon, Amonia ma ọ bụ CO2
● Mere nke oké osimiri mmiri na-eguzogide Aluminom, nri ọkwa. Ogwe osisi aluminom dị 25mm gbara ọkpụrụkpụ na-enye ike dị elu, nguzogide corrosion na nrụpụta ọkụ. Efere akpadola akpaka ma nwee nrụrụ pere mpe.
● The Square efere friza si Herọd bụ igwe anaghị agba nchara. Ọ nwere ike hụ na gburugburu mmiri mmiri gburugburu na mfe ọcha.
● PTFE ehi ehi-free mgbanwe sooks nkwonkwo, flanged ma ọ bụ eri njikọ. A na-ekpuchi sooks ahụ na 304L igwe anaghị agba nchara braid.
Ọkpụrụkpụ nke efere evaporative: 25mm; Anya n'etiti efere: 40-90mm
* Nkọwapụta dị iche iche ga-agbanwe na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ onye na-ere ahịa tupu itinye iwu.
* Ahaziri imewe dị maka pụrụ iche chọrọ.
●Ọ dị mma ịkwado azụ, oporo, anụ, anụ ọkụkọ, nri dị njikere na trays ma ọ bụ igbe.